पुस्कल शर्मालाई पनि लाग्यो गीत चो*रीको आ*रोप, पहिलो पटक मिडियामा पुस्कल (भिडियो) »
काठमाडौँ ४ श्रावण । चर्चामा रहेका लोक दोहोरी गायक पुस्कल शर्मा, आफैमा नायक पनि हुन् । धेरै जसो बियोगान्ताका गीत गाउने पुस्कलका गीत निकै चर्चामा रहेका छन् । गायक पुस्कल शर्मा लाइ गीत चोरीको आरोप लागेपछी लोक गायक पुस्कल शर्मा मिडियामा आएका छन् । उक्त गीत चोरेको विषय पछिल्लो समय भाइरल बनेको छ । पुस्कल माथि पीडित कलाकारहरूले आफ्नो सृजना चोरी भएको भन्दै तत्काल नै नाम राख्न अनुरोध गरेपछी शर्मा मिडियामा आएका हुन् । पुस्कल शर्मा आफ्नो अवस्थालाई बुझ्न नसकेपछी मिडियामा आएका हुन् ।
२० वर्ष अगाडी नै यो गीत गाउँमा गाउने भएको र यसलाई सङ्कलनको रूपमा आफूले गाएको उनको भनाई छ।पुस्कल भन्छन्’मेरो मानहानी भएको छ कुनै पनि हालतमा म कानुनी रूपमा लड्न बाध्य हुन्छु।पुस्कलालाई गाली गर्नेहरूलाई समेत मानबियता राखेर बोल्न अनुरोध गरेका छन्।गीत दुवै सुनेर पुरानो गीतलाई सोचेर मात्रै कमेन्ट गर्न अनुरोध समेत गरेका छन हेरौँ भिडियो कुराकानी :
यो पनीः जादुमय स्वरकी धनी गायिका समीक्षा अधिकारीको तिज गीत बजारमा (भिडियो सहित)
काठमाडौँ ४ श्रावण । जादुमय स्वरकी धनी गायिका समीक्षा अधिकारीको पहिलो तिज गीत बजारमा आएको छ । सानै उमेर देखी कलाकार बन्ने महान् उद्देश्य बोकेकी समीक्षाको आवाजले दर्शक श्रोताको मन जित्न सफल भएकी छिन्। समीक्षाको स्वरमा रहेको ‘सलक्कै’ बोलको तिज गीत उनको पहिलो तिज गीत हो । गीतमा वसन्त विश्वकर्माको शब्द सङ्गीत रहेको छ भने समीक्षा अधिकारी र मधु पाण्डेले आवाज दिएका छन् ।
मायाले लगाएको ढाका टोपी र रातो टिकाको कुरालाई तिज गीतमा समेटिएको छ । हिम सम्झौता डिजिटलको प्रस्तुति रहेको गित लाइ कारण चैसिरले खिचेका हुन् भने मनोज कार्कीले सम्पादन गरेका हुन् । गीतमा धुर्ब हिमाली ,रिना थापा ,सर्मिला अधिकारी र कुशल चौधरीको नृत्य रहेको छ । भिडियोलाई मौसम हिमालीले निर्देशन गरेका हुन् । भिडियो हेर्नुहोस्ः
यो पनीः केकी अधिकारीको फिटनेसको रहस्य ‘जुम्बा र योग’ आलोपालो…(५ तस्विरमा हेर्नुहोस्)
अभिनेत्री केकी अधिकारीले आफू फिटनेस रहनुको रहस्य बताएकी छिन् । म्युजिकल भिडियो हुँदै सिने क्षेत्रमा पाइला टेकेकी केकीले मनोरञ्जन क्षेत्रमा एक दशक बिताइसकेकी छिन् । सन् २०१० मा चलचित्र ‘स्वर’ बाट सिने क्षेत्रमा डेब्यु गरेकी केकीले थुप्रै स्मरणीय फिल्ममा अभिनय गरेकी छिन् । गत वर्ष चलचित्र ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’ बनाएर निमार्णमा प्रवेश गरेकी उनले यो वर्ष चलचित्र सँगै ‘कमेडी च्याम्पियन’ सो कमेडी टेलिभिजन कार्यक्रम ल्याउँदै छिन् । सकारात्मक सोचलाई आफ्नो सुन्दरता र तन्दुरुस्तीको कारण मान्ने केकीले ‘सम्पूर्ण’लाई ( ‘जुम्बा र योग आलोपालो गर्छु’) आफ्नो फिटनेस रहस्य बताएकी छिन्। छरितो ज्यानका लागि जिम
खानामा सन्तुलन छैन भने जिम जति गरे पनि केही फरक पार्दैन। त्यसैले मैले खानालाई ८० प्रतिशत र जिमलाई २० प्रतिशत मान्ने गरेकी छु। सही समयमा सही खानाले मात्र शरीर स्वस्थ हुन्छ। दुई ग्लास कागती पानी खाएर मेरो दिनको सुरुवात हुन्छ। पानीपछि एउटा स्याउ खान्छु। खाली पेटमा अरू खानेकुरा खायो भने ग्यास्ट्रिक हुने सम्भावना हुन्छ। तर, स्याउले न्युट्रलाइज गर्छ। बिहान र बेलुका दुवै समय भात खान्नँ, रोटी खान्छु। त्यो पनि जम्मा दुई–दुई वटा। रोटीसँगै तरकारी र अचार खान्छु। थोरै खाने तर खाइरहने मेरो बानी छ। हरेक दुई घण्टामा केही न केही खानै पर्छ।
त्यसैले मेरो झोलामा स्याउ र केही फलफूल हुन्छन् नै। कहिलेकाहीँ राति अबेरसम्म पढ्दा वा फिल्म हेर्दा अलिक ढिलासम्म बस्नुपर्‍यो भने बदाम वा स्वाउ खान्छु। शरीर स्वस्थ रहन निद्राको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। सुत्ने रुटिन पनि नियमित फलो गर्छु। सुटिङ वा अरू कुनै काम परेन भने बेलुका ७ बजेसम्म खाना खाइसक्छु र १० बजेसम्म सुतिसक्छु। अन्नपुर्ण पोष्ट बाट साभार । ४. ५. ६. तस्बिर: प्रस्तुतिः कुबेर डंगोल